Shop ရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး ၆နှစ်ပြည့်လဲဖြစ်တဲ့ Shop Anniversary အထူးစျေးရောင်းပွဲတော် - Shop
Shop ရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး ၆နှစ်ပြည့်လဲဖြစ်တဲ့ Shop Anniversary အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်0310
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ lမယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေနဲ့ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ 9.9 Super Saleမှာ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 9.9 Super Sale ကြီးမှာ တစ်ခဲနက်ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရော 9.9 Super Sale မှာ မဝယ်လိုက်ရတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက် နောက်ထပ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုဟာမကြာမှီရောက်ရှိလို့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို အထူးလျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ ရောင်းချပေးမယ့် 10.10 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop Anniversary စျေးရောင်းပွဲတော်ဟာဆိုရင်လဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး Shop ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာတော့ ၆နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး Shop မှာ အစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို လျှော့စျေးအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးက တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို စျေးတန်တန်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ‌10.10 စျေးရောင်းပွဲတော် မှာဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေမှစပြီး ယောကျာ်းလေး/မိန်းကလေး ဝတ်ဖက်ရှင်တွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ အလှကုန်တွေ၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ ခလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင် အခြားကုန်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ဒီ Shop Anniversary စျေးရောင်းပွဲတော်မှာဆိုရင်တော့ ကုန်စ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ကျော်ကို အထူးလျှော့စျေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်နေရာထဲမှာရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေတင်မကသေးပဲ 9.9 Super Sale တုန်းကလိုပဲ အထူးလျှော့စျေးအစီအစဉ်တွေ၊ ဘောင်ချာကုဒ်တွေရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွေအပြင်၊ အခမဲ့ပို့ဆောင်ခွင့်တွေရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေပါ ပြန်လည်ပါဝင်လာဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shop.com.mmရဲ့ ၆နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ Shop Anniversary စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝယ်ယူသူအားလုံးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…
Shop.com.mm သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ online shopping platform ကိုဦးဆောင်နေလျက်ရှီပြီး ထောင်ချီသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် သန်းချီသာ ဝယ်ယူသူများကို Shop.com.mm Platform မှတစ်ဆင့် ရောင်းချပေး လျက်ရှိသည်။ Shop တွင် ပစ္စည်းပေါင်း ငါးသိန်းကျော် နှင့် အမျိုးအစားပေါင်း တစ်ရာကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ တွင် Alibaba သည် shop.com.mm ကို ၁၀၀% အပြီးအပိုင် ဝယ်ယူလိုက်ပြီး နည်းပညာအသစ်များမြှင့်တင်ကာ Personalized product feeds၊ Instant messaging ၊ flash sales၊ ဂိမ်းများနှင့် in-app customer service များအပြင် ရောင်းသူ၏ ပစ္စည်းများကို ပိုမိုရောင်းကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်သော (seller recommendations) အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ရရှိလာခဲ့သည်။
Shop.com.mm သည် Alibaba၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုဖြင့် တိုးတက်သော နည်းပညာများ၊ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဝယ်ယူသူများအား online ပေါ်တွင် ယုံကြည့် စိတ်ချစွာ ဈေးဝယ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိသည်။
Shop Anniversary A yearly Shopping Festival alsoa6th Anniversary of Shop.com.mm
A leading local E-commerce platform Shop.com.mm already held the 9.9 Super sale with unbelievable prices and discounts. For those who haven’t participated and also for who already have, the good news is there’s an exciting campaign coming up very soon. It’s the Shopping Anniversary that will be available with various products and attractive promotions.
Shop Anniversary Super Sale is the yearly festival of Shop and it’s also the anniversary day of Shop.com.mm. This year is the 6th Anniversary of Shop and in the Shop Anniversary Super Sale, there will be various products with various promotions including for those customers who always buy from Shop.com.mm with special thanks. This kind of promotion is once inayear chance and it’s also an opportunity to buy the necessary products at affordable prices. In Shopping Anniversary, there will be included from Electronics products to the various categories like Fashion, Home Appliances, Beauty products, Grocery, and Baby products.
In Shopping Anniversary, there would be able to buy 100,000 products from 5,000 brands in one place. Besides the special promotions, voucher codes and free delivery chances like 9.9 Super Sale will also be included.
Shopping Anniversary, the 6th Anniversary of Shop.com.mm will start on Oct 10 so we would like to welcome the all customers to participate and get awesome promotions that should not miss out.
The Shop MM is the leading online shopping platform in Myanmar, empowering thousands of sellers to connect with millions of customers. Shop provides immediate and easy access to 500,000+ products sold by over 2000 sellers in more than 100+ categories.
Shop Myanmar was acquired 100% by Alibaba in May 2018. Alibaba has provided its world-class technology to Shop in late 2018. The new technology provides better user experience with new application features such asapersonalized product recommendation feed, instant messaging between sellers and customers, flash sales, games, in-application customer service, in-application buyer reviews of products, collections, and seller recommendations. Shop, with the support of Alibaba, is continuously improving and innovating technology for better online shopping experience for both sellers and customers.
Previous Articleဆံပင်ကျွတ်ခြင်း နဲ့ ဆံသားကြမ်းခြင်းတွေကိုသက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများNext Articleအိမ်မှာနေရင်း Homemade ကိတ်မုန့်လေးတွေလုပ်စားကြမယ်